Tag: susie munyore
Muvhuro, June 16, 2014 Chipiri, February 26, 2019 Douglas Karr
Ndakavenga GoDaddy. Ndakadaro zvechokwadi. Ini ndaisatenda kuti brand inogona kushandisa mamirioni emadhora kupenya cleavage uye kuramba ndichivaka bhizinesi rakakura. Yakanga iri mbama kumeso kune vashambadziri vakashanda nesimba kuchengetedza zvigadzirwa zvavo zvine chekuita, zvakajeka, zvine hunyanzvi uye zvinobatsira kune vateereri vavo. Yaive nzira iri nyore yekubuda… uye yaitaridzika kunge iri kushanda. Ini ndakaraira vese vatengi vangu kuti vashandise mamwe masevhisi uye vagare kure. Nokufamba kwenguva, zvakadaro,